VPN inoshandiswa nevakawanda kana kuti kuve nechokwadi kuti haisi yekucherechedza muIndaneti kana dzimwe nguva basa rayo rinovada kuti vauye kune VPN kuti vave pane yakachengeteka. Dzimwe nguva, mitambo yehutano inokonzera kukanganisa, uye iwe haugone kubatanidza. Kwose iyo webhusaiti haina kukwana, kana iwe haugone kuvhara kunetaneti uchishandisa VPN. Muchiitiko ichi, tiri kugovera dzimwe mazano ekugadzirisa Windows 10 VPN isiri kushanda nyaya.
Kana iwe uine matambudziko ekubatana neVPN, zvino mutungamiri uyu anoratidza nzira yekugadzirisa Windows 10 VPN isiri kushanda nyaya. Iyi mhinduro inopa mhinduro dze - VPN muteereri haishandi kana kusabatanidza, inobatanidza asi hapana kuwanika, inobatanidza asi peji yewebhu isina kuitisa, yakakundikana kutanga chekubatanidza, nezvimwe. Mhinduro inogona kuva iri DNS iri nyore kana kuti yakaoma sekugadzira registry kupinda. Regai titarise mashoko acho.
Tangotanga tatanga, heino mamwe mazano ekutambudza matambudziko aunoda kuedza kugadzirisa nyaya dzeVPN Windows 10. Kutanga, iva nechokwadi chako Windows 10 inovandudzwa kusvika kumushanduro wapfuura. Zvimwe zvinyorwa zvinogadzirisa nyaya dzinozivikanwa dzakapoteredza VPN dzinobatsira pakarepo. Chepiri, dzorerazve mambure ekufambisa kusvika kune shanduro yemazuva ano kana edza vamwe vatyairi vekare kuti vaone kana izvozvo zvichigadzirisa. Pakupedzisira, nyaya yacho inogona kuva yakajeka seyo Cached DNS. Kunyangwe iwe wakanga uchinje, iyo kombiyuta inoshandisa kero yekare. Saka iwe unogona kuda shandisa DNS cache. Unogonawo kuona kana iwe router inoda kuvandudzwa. Mashoko acho achawanikwa neIndaneti Interface ye router.
VPN isingashandisi Windows 10
Iye zvino, ngatitarisei dzimwe dzepfungwa dzakagadzirisa kugadzirisa nyaya dzakapoteredza VPN. Aya mazano achada mumwe munhu ane ruzivo rwakanaka Windows 10. Pamwe neizvi, unoda a Accounting account.
1] Dzorerai VPN Software
Kana uri kushandisa a VPN software, panzvimbo ye inbuilt VPN chikamu che Windows 10, inogara iri pfungwa yakanaka yekudzosera iyo. Kazhinji nguva yekugadzirisa kwe software ndiyo iyo inokonzera dambudziko, uye zvigadzirisho zvekudzorera zvakare. Uyewo, terera muchengeti kana VPN yako yekubhadhara software yapera.
2] Dzorerai WAN MiniPorts
WAN Miniports madhiraivha emhando dzakasiyana dze network yekubatanidza. WAN Miniport (IP), WAN Miniport (IPv6) uye WAN Miniport (PPTP) anoshandiswa kune VPN kubatana, kureva, kubatana kune iyo PPTP VPN server. Iwe unogona kudzoreredza zviri nyore vatyairi zvakare uchishandisa Windows.
Vhura Dhijimeri yedhadhi
Tsvaga Network Adapters
Uninstall WAN Miniport (IP), WAN Miniport (IPv6) uye WAN Miniport (PPTP).
Dzvanya Action, uye Shandisa hardware shanduko
I-adapters yawakangobvisa chete inofanira kudzoka
Edza kubatanidza zvakare. Tariro, iwe unofanira kuva wakanaka kuenda.
[Mufananidzo uri papeji 3] Troubleshoot TAP-Windows adhaputa
Aya ndiwo chaiwo network kernel zvishandiso kureva software yakavakirwa, uye inopa chaiyo TAP chishandiso mashandiro pane iyo Windows OS. Nguva zhinji izvi zvinotarisirwa kuti software yeVPN ishande nemazvo. Tinogona kukurudzira zvikuru kuti utarise dzidziso yedu pa TAP-Windows Adapters.
4] Isa Inonyanya kukosha yeDP nekugadzirisa Registry
UDP kana User Datagram Protocol ndiyo imwe nzira yekufambisa data, senge TCP. Nekudaro, UDP inoshandiswa zvakanyanya kugadzira yakaderera-latency uye kurasikirwa-kushivirira kubatana pakati pezvishandiso pa internet. Mazhinji maVPN software uye kunyange Windows anoshandisa icho. Kana paine nyaya yekuchengetedza yakatenderedza, zvinokundikana kureva UDP inoda kumisikidza mapato ezvekuchengetedza kana ese server neiyo Windows PC.
Tevera matanho aya kuti uwane Registry Editor. Iwe unogona kudika kuumba kana kuvandudza kuiswa kwatsva.
Backup registry yako.
MuCortana search bar, tanga regedit uye ozarura Registry Editor kubva pane zvakasarudzwa
Enda kune HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesPolicyAgent
Kanda-kona, uye gadzira DWORD itsva (32-bit) Value.
mhando AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule, uye zvino tapinda ENTER.
Kungofa AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule, uye ipapo tora Shandura.
MuI Value Data box, tanga 2. Kukosha kwemaviri kugadziriswa Windows kuitira kuti igone kumisikidza mapato ezvekuchengetedza kana ese server neiyo Windows-based VPN mutengi komputa ari kumashure kweNAT zvishandiso.
Tangazve, uye edza zvakare.
5] Gadzira Firewall
Windows firewall inova nechokwadi chekuti hapana chisina kuchengetedzwa kana kusabvumidzwa kubatana kunowana mukana kune yako PC. Windows Firewall inogona kudzima kana kukiya iyo kukumbira kubva kuVPN software ichifunga kuti ityisidziro.
MuCortana Tsvaga bar, tape firewall uye sarudza "Rega app kuburikidza Windows firewall".
Click on Shandura bhokisi rezvirongwa.
Mutsamba huru, tsvaga VPN yako software. Ita chokwadi chekuita kuti zvose zviri zviviri Mutungamiri uye Wega mitambo inobvumira.
Kana software yako isina kunyorwa, unogona kuiwana iwe uchiishandisa Rega imwe sangano.
Iva nechokwadi chekuchinja uye edza kuungana kuburikidza neVPN yako zvakare.
6] Dzinga IPv6
Nguva yakawanda IPv6 inogona kukonzera dambudziko kushamwaridzana kunetaneti. Kunyange zvazvo zvisiri izvo zvichiri kuiswa kuPv4, unokwanisa kuyambuka nekudzivisa IPv6 uye shandisa zvinhu zvose paIvv4. Zvose VPN inoshandisa software-based network adapter. Iwe unongoda kuchinja zvigadziridziri zvepakitaji yeVPN iyi kuIpv4.
Open Network uye Internet ndokuzo Network and Sharing Center.
Sarudza Shanduko yekugadzirisa mapapiro kubva kuruboshwe rworuboshwe.
Kanda-kanda pane VPN network adapter uye yakazaruka Properties.
Uncheck bhokisi riri pedyo IPv6 uye simbisa kuchinja.
Dzorera PC yako kana uchida, uye edza zvakare.
Ona iyi chinyorwa kana uchida disable IPv6 pakombiyuta yako.
Une IVPN Error Code yekutora kwako?
Kana iwe uine chikwanganiso chekukanganisa kweVPN yako nyaya, tine nzvimbo yakatsaurirwa, pamwe nekugadzirisa kugadzirisa. Itai kuti tione nzvimbo yedu Kazhinji VPN kukanganiswa kwemitemo kukanganisika & mhinduro dze Windows 10
Ndinotarisira, pane imwe yemazano aya kugadzirisa Windows 10 VPN isiri kushanda inofanira kunge yakapedza dambudziko rako.
Unoda VPN? Heano masevhisi akanakisa anowanikwa izvozvi
Nzira Yekudzivirira IPv6 pa Ubuntu Linux
Yakanakisa VPN 2021: Iwo akanakisa masevhisi eVPN gore rino
FIX: VPN kukanganisa 720 Windows 10 kushandisa 7 zvakachengeteka mhinduro
Yakanakisa VPN 2020: Iwo akanakisa maVPN ekumhanyisa, kuvanzika uye kutenderera
Best VPN services: Ongororo uye kutenga mazano
Maitiro ekusetta PPTP VPN pa Windows 10 (Rizere Ruzivo)
5 akanakisa VPNs veKorea kukunda hurumende censorship
Maitiro ekuisa VPN paAmazon Fire TV Stick [Hapana Root Inodiwa]